Dhamaan Waxyaabaha Ku Saabsan Xannaanada - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Adduunyo suurtagal ah ayaa ka bilaabmaya Xanaanada Carruurta
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay siisaa ilmahaaga fursado aan caadi ahayn. Ardayda waxaa lasiiyaa ikhtiyaarro iyo waxqabadyo barasho oo gacan qabasho ah oo ku saabsan farshaxanka luqadda, akhris-qorista, xisaabta, sayniska, farshaxanka, muusikada, caafimaadka iyo ladnaanta, xirfadaha bulshada-shucuurta iyo horumarka jirka.
Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad sahamiso 11 dugsiyadeena hoose.
Qalabka Raadiyaha Iskuulka
Xanaanada caruurta ee iskuulada Robbinsdale
Hagaha Qoyska Xanaanada
Buug yaraheena xanaanada caruurta wuxuu bixiyaa macluumaad kusaabsan diiwaangelinta, isqorista furan, jadwalada muhiimka ah, heerarka tacliimeed, xulashooyinka daryeelka da'da iskuulka iyo inbadan.
Qoys walba waxaa lagu meeleeyaa iskuullada "aagga kaqeybgalka", iyadoo lagu saleynayo cinwaanka gurigooda. Qoysasku waxay ku heli karaan aaggooda kaqeybgalka dugsiga iyagoo adeegsanaya aaladda Finder Tool ee hoos ku xusan.
Tilmaanta Qoyska ee Xannaanada - Ingiriis
Hagaha Qoyska - Isbaanish
ah oo ku saabsan xanaaqa kindergarten P
Dugsiyada Hoose Neighborhood
Deriska ama iskuulada aaga kaqeybgalka waxay bixiyaan adeeg waxbarasho oo dhameystiran carruurta iyo qoysaska ku nool xaafada. Iskuuladan waxay kobciyaan dareenka sharafka bulshada waxayna taageeraan iskaashiga bulshada.
Dugsiga Hoose ee Lakeview - Diirada Caalamiga ee Baccalaureate
Dugsiga Hoose Meadow Lake - Feejignaanta UBADKA
Dugsiga Hoose ee Noble - Sayniska Kombuyuutarka / Focus Focus
Northport Elementary - Isdhexgalka Farshaxanka / Dual Iskudhafka Isbaanishka
Forest waxay u heellan tahay inay ardayda oo dhan siiso waxbarasho heer sare ah si ilmo kasta ugu guuleysto dugsiga iyo nolosha. Iyada oo rajo weyn laga qabo barashada iyo dhaqanka, xubnaha shaqaalaha Kaymaha waxay u heellan yihiin la kulanka baahiyaha arday kasta si ay u gaaraan kartidooda buuxda. Waxaan ardayda siineynaa khibrad waxbarasho oo isku dhafan oo tikniyoolajiyad ah. Fasal kastaa wuxuu leeyahay nidaam casriyeyn oo maqal ah oo la casriyeeyay, loox SMART ah, laptops, iyo marin u helka kombiyuutarada iyada oo loo marayo labada shaybaar ee kumbuyuutarka.
Dugsiga Hoose ee Lakeview waa dugsi la oggol yahay oo loogu talagalay Barnaamijka Sannadlaha Dugsiga Hoose ee Baccalaureate (IBPYP). IBPYP waxay qaadataa qaab caalami ah oo wax loogu barayo cunugga oo dhan waxbarasho ku saleysan baaritaan. Iyada oo loo marayo waxbarasho adag oo kaladuwan, ardaydu waxay bartaan xirfadaha xalinta dhibaatooyinka, waxay qadarinayaan dhaqamada kala duwan waxayna kasbanayaan fahamka meeshooda adduun. IBPYP waxay siisaa qaab-dhismeedka manhajka luqadaha farshaxanka, xisaabta, sayniska / teknolojiyada, cilmiga bulshada, farshaxanka iyo shaqsiyaadka / bulshada / jimicsiga jirka. Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay su'aalo weydiiyaan, u fekeraan si xeel dheer oo ay xiriir uga sameeyaan barashada iyo nolol maalmeedkooda.
Dugsiga Lakeview, ardaydu waxay kaqeyb qaataan khibrada iyo kaqeyb galka waxbarashada. Smartboolka ayaa ku jira fasal kasta, ardayduna waxay leeyihiin aalado 1: 1 ah (Chromebooks ama Ipads). Teknolojiyaddu waxay gacan ka geysaneysaa ku-habboonaanta, gacan-qabashada iyo ka-qaybgalka barashada ardayda.
Dhammaan ardayda waxay helayaan waxbarid ku saabsan labada luuqadood ee Isbaanishka iyo dhaqanka laga bilaabo xanaanada. Tilmaamaha ku baxa luqad dheeri ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Barnaamijka IBPYP. Waxbarista luuqada iyo dhaqanka waxay ka caawineysaa balaarinta maskaxda maskaxda dhalinyarada barashada qiimaha xiriirka caalamiga.
Jawi ku dhisan is aaminaad iyo ixtiraam, Meadow Lake waxay iskaashi la yeelan doontaa waalidiinta iyo bulshada, waxay u suurtogelin doontaa dhammaan carruurta inay bartaan oo ay noqdaan muwaaddiniin daneeya wax soo saar leh oo adduunka isbeddelaya.
Waa mudnaan inaad ilmahaaga ku haysato dugsigeenna. Waxaan haynaa shaqaale u heellan oo halkan u jooga ka caawinta hagidda guusha waxbarasho ee ilmahaaga, horumarka bulshada iyo dhammaystirka caqliga. Ardaydu waxay wax ku bartaan waxqabadyada gacanta, baaritaanka gacanta koowaad, iyo ku dabaqida aqoonta iyo xirfadaha fikirka dhibaatooyinka kakan. Si tan loo dhammeeyo, shaqaaluhu waxay ballan adag ku leeyihiin ardayda iyo waxbarashadooda. Lake Meadow wuxuu abuuray dhaqan wanaagsan, iyo la kulanka baahiyaha ardayda oo dhan ayaa ah mudnaanta. Diirad saarida canugga oo dhan waxay gacan ka geysan doontaa horumarinta xubnaha bulshada ee wax ku oolka ah.
Neill, waxaan ku dadaalnaa inaan u abuurno jawi ixtiraam leh, kobcinta iyo jawi waxbarasho oo ardayda oo dhan ah. Macallimiinta, shaqaalaha iyo qoysasku waxay leeyihiin rajooyin sare oo xagga ardayda ah xagga hanashada iyo akhlaaqda tacliimeed. Shaqaalaha dugsigu waa kuwo aad u tababaran oo leh nidaamyo taageero oo badan oo loo diyaariyo inay ka caawiyaan ardayda inay gaaraan guul. Bulshadeena bartayaasha waxay leedahay dareen sharaf. Waxaan aaminsanahay inaan u dabaaldegno guulaheena isla markaana aan muujino bil kasta inta lagu gudajiro shirarkeena PRIDE. Waxay kuxirantahay kulankeena PRIDE waa rajooyinka ixtiraamka iyo masuuliyada ee iskuulka oo dhan. Waxbarida caruurta waa masuuliyad muhiim ah oo abaal marin leh. Kaqeybgalka bulshada waxaa lagu dhiirigelinayaa Neill. Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad booqato markasta.
Waxaan ardayda siineynaa isdhexgal guud ee tikniyoolajiyadda si aan uga dhigno kuwa wax barta barta qarniga 21-aad ee loo yaqaan 'Chromebooks', ipads, 'laptop', desktops iyo shaashadda shaashadda weyn ee Smartboards. Fasalada xanaanada ilaa fasalka saddexaad waxaa lagu qalabeeyaa nidaamyo cod maqal ah oo leh makarafoonka macallinka oo loogu talagalay dhawaqa wareega ee fasalka.
Dugsiga Hoose ee Noble wuxuu diiradda saarayaa abuuritaanka bartayaal cimri dheer, taageeridda qoysaska, dhisidda bulshada iyo ixtiraamka kala duwanaanta! Waanu qadarinaynaa sida ilmahaagu qaali u yahay oo waxaan aqoonsan nahay waajibaadka naga saaran ka caawinta carruurta oo dhan inay gaaraan kartidooda ugu sareysa. Waxaan aaminsanahay in cunug walba uu yahay mid gaar ah oo la qiimeeyo.
Shaqaalaha sharafta leh waxaa ka go'an inay adeegsadaan hababka waxbarida ee ku saleysan cilmi baarista, u habeynta manhajka si ilmo kasta baahidiisa loogu daboolo heerkooda, iyo ku darida teknoolojiyada casriga ah waxbarashadooda maalinlaha ah si loogu diyaariyo qarniga 21aad. Macallimiinteennu waa kuwa nolosha wax ku barta. Dhawaan waxay heleen tababar ku saabsan Waxbarashada STEM (Sayniska, Teknolojiyada, Injineerinka iyo Xisaabta), NUA (Isbahaysiga Magaalooyinka Qaranka) Istaraatiijiyadaha, Akhriska Dheeraadka ah, Ereyada Wadadooda iyo Gizmos (xisaabaadka isdhexgalka iyo sayniska). Tababbarkaani wuxuu na siinayaa xirfadaha lagama maarmaanka u ah in aan siino qaab mideysan oo lagu mideynayo waxbaridda dhaqanka iyo manhajka la xiriirta si carruurta oo dhami ay wax ugu bartaan awooddooda ugu buuxda.
Bulshada Northport waxay siisaa jawi waxbarasho oo leh himilooyin sare oo ku saabsan lahaanshaha, noqoshada dareenka, gaaritaanka awooddeena ugu sareysa, iyo muujinta ixtiraamka dadka oo dhan. Dugsiga Hoose ee Northport waa iskuulka loo yaqaan 'K-5 Turnaround Arts' oo ku caan ah ixtiraam, kobcin iyo jawi dhib badan. Macallimiinta, shaqaalaha iyo qoysasku waxay leeyihiin rajooyin sare oo xagga ardayda ah xagga hanashada iyo akhlaaqda tacliimeed. Northport waxay aaminsantahay in waxbarashadu ay tahay iskaashi dhexmara ardayda, waalidiinta iyo iskuulka. Waxaa naga go'an inaan noqono iskuul dhaqan ahaan ka jawaab celiya lana kulmo baahiyaha bulshada dugsigeena.
Waxaan ku dareynaa manhajkeena sayniska STEM fasalada 3 ilaa 5. Macalimiinteena fasalka waxay si wada jir ah wax ula bartaan macallin STEM oo la aqoonsan yahay iyadoo la adeegsanayo barashada mashruuc ku saleysan baaritaanka, isku xirnaanta fiidiyowga adduunka dhabta ah, howlaha waxqabadka iyo howlaha akhris-qorista.
Barnaamijkeena Farshaxanka ee Soo-noqoshada wuxuu adeegsadaa farshaxanka si loogu wajaho baridda iyo barashada. Waxaan u isticmaalnaa ganaaxa iyo waxqabadka farshaxanka dariiqyada aasaasiga ah ee waxbarashada. Hadafka isdhexgalka farshaxanka ayaa ah in la kordhiyo aqoonta maadada guud iyadoo isla mar ahaantaana la kobcinayo faham weyn iyo qaddarinta farshaxanka wanaagsan iyo waxqabadka.
Barnaamijkeena Laba-Laadka ah ee Isbaanishka Labada-af wuxuu u furan yahay ardayda dhigata Dugsiga Hoose ee Northport. Barnaamijkan, ardayda ka soo kala jeeda luqado kala duwan ayaa wax ku wada barta halka tacliinta si nidaamsan loogu bixiyo laba af. Ardaydu waxay akhriyaan, qoraan, dhagaystaan oo ku hadlaan labada luuqadood iyagoo noqonaya laba-luqadood, aqoon-yaqaan iyo laba-dhaqameed iyagoo ka shaqeynaya xagga hanashada heerka tacliimeed ee heerka fasalka. Labada luuqad waxay ardayda siisaa fursad ay kudarsadaan luuqad kale inta ay kujiraan da'da ugufiican ee barashada luuqada.
Dugsiga Hoose ee Sonnesyn wuxuu ardayda K-5 siiyaa waxbarasho dhammaystiran oo wax ka qabata. "Haddii aad rumaysato, waad guuleysan kartaa!" Waxaan aaminsanahay seddexda B-ixtiraam. Masuul noqo. Iska Leh
Sonnesyn waxay leedahay dhaqan hodan ku ah bulshada iyo kaqeybgalka waalidka. Xubnaha bulshada Sonnesyn waxay ku dadaalayaan inay abuuraan jawi buuxiya baahiyaha dhammaan ardaydayada iyo qoysaskeena. Xubin kasta oo ka tirsan bulshada Sonnesyn waxaa ka go'an inay taageerto dhammaan ardayda si ay u gaaraan himilooyinkooda.
Sonnesyn waxay leedahay barnaamij tacliimeed xoogan oo diiradda saaraya hubinta in dhammaan ardayda ay helaan waxbarid u dhiganta baahidooda kana caawisa inay ku guuleystaan heerar sare. Shaqaalaha Sonnesyn waxay ka shaqeeyaan kooxo iskaashi oo ka faa'iideysta heerarka Gobolka Minnesota si loo kaxeeyo barashadayada aasaasiga ah. Shaqaalaheennu waxay u adeegsadaan xogta si ay u tilmaamaan meelaha koritaanka ee arday kasta ayna wax ka beddelaan kooxaha waxbarista si ay u siiyaan kaalmo dheeraad ah ama fursado kobcin ah ardayda. Sonnesyn manhajkeeda aasaasiga ah ee dhammeystiran wuxuu la jaan qaadayaa waxbarida aasaasiga ah ee Dugsiyada Robbinsdale Area.
Zachary Lane waa dugsiga hoose-dhexe ee K-5 oo ku faana in uu gaarsiiyay waxbarasho heer sare ah dhammaan ardayda. Waxaan aaminsanahay fure u ah kor u qaadista guusha ardayda inay tahay kobcinta iskaashi adag oo u dhexeeya guriga, dugsiga iyo bulshada. Ixtiraam. Masuul Noqo. HOGGAAMIYE noqo.
Jagada barashada mashquulinta ee Zachary Lane waxaa loogu talagalay in lagu dhiso hogaamiyaasha berrito maanta. Xubnaha shaqaaluhu waxay u heellan yihiin hababka waxbaridda ee hadda ku saleysan cilmi-baarista, habeynta manhajka si ilmo kasta baahidiisa loo daboolo heerkooda, iyo in lagu daro teknoolojiyad casri ah waxbarashadooda iyo waxbarashadooda maalinlaha ah.
Waxaan ardayda siineynaa isdhexgal guud ee tikniyoolajiyadda si aan uga dhigno kuwa wax barta barta qarniga 21-aad ee loo yaqaan 'Chromebooks', ipads, 'laptop', desktops iyo shaashadda shaashadda weyn ee Smartboards.
Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo lagu barto nooc kasta oo bartayaal ah, oo ay ku jiraan adeegyada hibada leh, adeegyada lala beegsanayo ee lagu hagaajinayo xisaabta iyo akhriska, ka dib dugsiga chess club iyo fasallada kobcinta Discover U. Waxaan iskaashi la leenahay ururo kala duwan si aan u siino khibrado waxbarasho oo isugu jira waxbarashada iyo adeegga.
Dugsiyada Hoose ee Magnet
Dugsiyada 'Magnet' waxay bixiyaan waxbarasho dhammaystiran oo diiradda lagu saarayo dugsiga oo dhan qayb gaar ah oo daraasad ah. Dugsiyada 'Magnet' waxay qoysaska ka soo ururiyaan guud ahaan degmada iyadoo basaska la siinayo.
Qoysasku waa inay ku dalbadaan nidaamka bakhtiyaanasiibka si ay uga qeyb galaan iskuulka magnetka. Codsiyada dugsiga Magnet waxaa la heli karaa Diseembar 1, 2020, oo ay ku egtahay waqtiga kama dambaysta ah ee la codsanayo 4 galabnimo Jimce, Febraayo 26, 2021. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa boggayaga Diiwaangelinta .
LAYNKA Xajka ee FAIR - Farshaxanka Farshaxanka Fiican
Dugsiga Imtixaanka Isbaanishka ee Robbinsdale (RSI)
Dugsiga injineernimada iyo farshaxanka (SEA) - Feejignaanta 'STEAM'
FAIR (Fine Arts Interdisciplinary Resource) School Pilgrim Lane waa iskuul magnet farshaxan oo u adeega ardayda Kindergarten ilaa Fasalka 4aad (FAIR Crystal waxay u adeegtaa ardayda fasalada 5-8). Sida iskuulka bakhtiyaa-nasiibka dadweynaha, qoysaska ku nool gudaha iyo dibedda degmada 281 ayaa codsan kara inay ku soo biiraan barnaamijkeenna.
Dugsiga FAIR waa natiijada fikirka waxbarasho ee mala awaalka ah, qorshaynta manhajka curinta iyo hal-abuurnimada. Xaruntayada, oo ku taal xaafadda woqooyi-galbeed ee Plymouth, waa iskuul qaran laga aqoonsan yahay oo ay wada leeyihiin Waaxda Waxbarashada Mareykanka iyo Xarunta Farshaxanka ee Kennedy.
Habka FAIR wuxuu bilaabmay 2000, halkaas oo uu ku xuubsiibtay kuna koray. Ardaydu waxay wax ku bartaan jawi tacliimeed adag oo dhiirrigeliya fikirka hal abuurka iyo hal abuurka leh. Ballan qaadkeenna xagga waxbarashada farshaxanka ayaa ardayda siineysa fursad ay si firfircoon uga qaybqaataan manhajyada la xiriira dhaqan ahaan iyo xuddun u leh ardayda. Iyadoo loo marayo habraaca edbinta edbinta, ardayda waxay ku sameeyaan isku xirnaansho garasho oo ku saabsan dhowr farsamo. Khibrada ardayga waxaa wanaajiyay iskaashiga gaarka ah ee dugsigu la leeyahay ururada bulshada iyo farshaxanada maxalliga ah. Ardaydu waxay khibrad qoto dheer u leeyihiin farsamooyin farshaxanno fara badan.
"Yo hablo español" waxaa loola jeedaa "Waxaan ku hadlaa Isbaanish." Bulshada RSI waxay ku dhiirrigelisaa xamaasadda luqadda Isbaanishka iyo dhaqanka iyadoo wax lagu barayo Isbaanishka oo dhan. Hadafkeenu waa inaan ku dhiirrigelino ardayda inay gaaraan heer tacliimeed heer sare ah iyagoo noqda kuwo ixtiraam leh, mas'uul ah oo daacad ka ah bulshada adduunka ee weligeed is beddeleysa. Waa mudnaan inaad ilmahaaga ku haysato dugsigeenna.
Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo lagu barto nooc kasta oo bartayaal ah, oo ay ku jiraan adeegyada hibada leh, adeegyada la beegsanayo ee sixidda xisaabta iyo akhriska, iyo howlaha dugsiga ka dib waxaa ka mid ah naadiyad adag oo shaashadda ah.
Maadaama aan nahay iskuulka bakhtiyaanasiibka K-5 ee dadweynaha, qoysaska ku nool gudaha iyo dibedda Degmada 281 ayaa codsan kara inay ku soo biiraan barnaamijkeenna.
2018 Waaxda Waxbarashada Mareykanka ee National Blue Ribbon School
2020 Waaxda Waxbarashada Mareykanka ee Green Ribbon School
SEA waxay salka ku haysaa falsafada 'STEAM', oo diiradda saareysa fikirka xasaasiga ah, iskaashiga iyo xalinta dhibaatooyinka. Jawi kicin iyo soo jiidasho leh ayaa kobciya dhammaan xiisaha xiisaha leh ee ardayda iyo farxadda helitaanka si loo gaaro heerar sare oo guul ah iyada oo loo marayo baaritaanka ku saleysan, barashada gacanta.
Ku saabsan Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay u adeegaan ku dhowaad 12,000 arday K-12 ah oo ka kala socda toddobo bulsho oo ku yaal aagga woqooyi-galbeed ee Magaalooyinka Mataanaha, oo ay ku jiraan Brooklyn Center, Brooklyn Park, Crystal, Golden Valley, New Hope, Plymouth iyo Robbinsdale. Degmadeennu waxay leedahay 11 dugsi hoose - seddex ka mid ah dugsiyadan ayaa ah iskuulada birlabta. Dugsiyada hoose waxay raacaan isla halbeegyada Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ee xanaanada, waxayna la jaan qaadayaan iskudhafka manhajka degmada K-3.